Waxaa maanta ku eg xilligii dowladda Kenya ay u qabatay Qaramada Midoobeey in ay ku soo gudbiso qorshaha xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Waxaa maanta ku eg xilligii dowladda Kenya ay u qabatay Qaramada Midoobeey...
Waxaa maanta ku eg xilligii dowladda Kenya ay u qabatay Qaramada Midoobeey in ay ku soo gudbiso qorshaha xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma
Waxaa maanta ku eg xilligii dowladda Kenya ay u qabatay Qaramada Midoobeey in ay ku soo gudbiso qorshaha xiritaanka xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma oo ay ku nool yihiin kumanaan Soomaali ah .
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in xeryahaasi ay dhibaato ku yihiin dhanka amniga.
Hay’adda Amnesty International qeybteeda Kenya ayaa ka digtay in si sharciga caalamiga ah khilaafsan loo xiro xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kakuma.
Xukuumadda Nairobi ayaa shaacisay qorshe ay ku doonaysa in todobaadkan gudihiisa ay ku xirto xeryahaas iyadoo sheegtay in amni darro ay ka soo wajahday dalkeeda.
Waxay sheegtay in ay rajeyneyso in Kenya ay aqbasho baaqa ay ugu jeedisay dib uga noqoshada go’aanka xiritaanka xeryaha.
Cabdullahi Xasan (Cabdullahi Soomaali) oo ah mas’uulka Amnesty u qaabilsan Soomaaliya ayaa BBC u sheegay in Ha’yadda si weyn uga soo horjeeddo qorshaha ay Kenya ku xireyso xeryaha Dhadhaab iyo Kaakuma.
Previous articleDowlada Itoobiya oo si kulul u eedeysay Dowladaha Masar iyo Suudaan
Next articleShil Ku dhawaad 20 qof ay ku dhimatay ka dib laba bas isku dheceen degaanka Kwamkikuyu oo ku teedsan waddada weyn ee Malindi-Mombasa.
Afhayeen u hadlay dowladda ayaa xaqiijiyay geerida Mr Moyo, kaasoo ku geeriyooday Isbitaal maxalli. subsiso Moyo ayaa ahaa Jeneraal hore, waxaa lagu xusuustaa inuu sanadkii...